SENTAfrica iyo LIVINGWAY WAXBARASHADA » Production Cuntada 2016
September 12, 2016 Jamie JamiesonDIRAA Africa News
BARNAAMIJKA wax soo saarka cuntada 2016
Realaid bilaabmaa marka aynu wax ku darsan karaan wanaagsan in awoodda oo ka mid ah hoggaamiyayaasha maxalliga ah si ay u bixiyaan kuwa ay mas'uul ka yihiin. LWE loo baahan yahay si loo hubiyo in xiriirka aan dhisno taageeri doonaa barnaamij ka mid ah beddelka xirfadaha. Iyadoo taa maanka waxaan wada leh Qasriga tuulada. Waxaan ka codsaday in loo aqoonsado kuwa adag jiray saboolka baahan si aan iyaga ka caawin kartaa in ay hawsha bixinta. Waxaan oo dhan ma uu samayn karin – laakiin waxaan qayb ka qaadan karta. Tani waxay noqon lahayd talaabada ugu horeysa ee nidaamka ah oo keeni lahayd in ay awood dheeraad ah oo adag in la kordhiyo wax-soosaarkooda dalagyada daruuriga. Ka dib kulan hordhac ah (halkan ku tilmaamay) waxa la isku raacay in Qasriga tuulada aqoonsado lahaa kuwa tuulooyinkoodii kuwaas oo awoodi doonaan in ay horseedi wada hadal ku saabsan sugnaanta cuntada la leh dadka soo dajinno Biyaha ee la soo dhaafay waxa ay ahaayeen dadka saboolka ah. First LWE booqan lahayd tuulooyinka.
Barnaamijka waxaa la dhigay on the 31st March 2016. On maanta madaxdii lagu wargaliyay in saraakiisha LWE booqan doona ka-faa'iideystayaal oo dhan on barnaamijka. Fariinta loo diray laba koox oo ragga madaxa tuulada KHWIDZI iyo KAMPHINDA waraaqo. Nuqulo ka mid ah warqaddii uu sidoo kale u soo diray oo dhan Qasriga tuulada. Lucky ku filan inta badan xubnaha beesha helay fariinta in kastoo Group Village Kamphinda inta lagu guda jiro kulan aas uu tuulada gudahood. Dadka waxaa loo sheegay oo jimicsi iyo waydiinayaa in aad wargaliso kuwa on barnaamijka in ay guryahooda ay ka soo jeedaan oo ku saabsan 1st April 2016.
shaqaalaha LWE ma doonayaan in ay raacaan la sugeeysay ah. Laba ka mid ah shaqaalaha LWE iyo laba nin oo taxi baaskiil ahaayeen ku filan oo diyaar u ah layliga. Kooxdani waxay lahaayeen si ay u isticmaalaan inay iskood si dadka ay doorteen madaxdii ka heli.
Tan iyo inta hoos timaada waa mid aad u weyn oo sidaas ayaa dadku ku ballaaran ku faafay oo aad u kala firdhi; waxaa loo qorsheeyay si ay u bilaabaan off sida ugu dhaqsaha badan. Waxaa la qorsheeyey in ay sameeyaan jimicsi kaliya hal maalin.
Hababka aad ula xiriirayso.
taxi Baaskiilka la isticmaalay. Waxaan dhigay off at 06:00 ahay
KULANKA THE BENEFICIACIRIES
Sida lagu soo sharxay ka hor, Khwidzi iyo Kamphinda leeyihiin 30 madaxdii tuulada yar kuwaas oo kaliya ku kala firdhay iyo faafinta ballaaran. Ma ahayn wax fudud in ay gaaraan kuwa darafka aad u fog oo ka mid ah tuulooyinka kale. Inta badan oo iyaga ka mid ahaayeen ilaa Mountain dhow iyo dugsiga hoose Mauni ka dib.
Waxa aan ahaa sidoo kale noo fududahay in ay doortaan dadka ugu nugul tan ugu badan ee aan la kulmay tuulada oo dhan waxay ahaayeen uun isku mid. Barnaamijka xaqiijinta Tani waxay sidoo kale indhahayaga furay si ay u arkaan odoroska xaaladda gaajo ah mustaqbalka dhow. Waxaan indhahayaga qaawan ku arkay qaar ka mid ah beeraha galleyda dhirta oo dhan dhimanayaan marxalad hore.
Dadku waxa ay dhab ahaantii ka cabanaya tuulooyinka kuwan. Oo dadka oo dhammuna; ma agoon oo kaliya. Tiro wanaagsan ee dadka aan booqday ahaayeen kuwo aad u gaboobay oo aan qof ku taageeraya. Oo carruurtooduna waxay hadda ka hor qaar la faafa ee HIV iyo AIDS dhintay iyaga oo ciirsi la afar ilaa lix Agoonta.
carruurta dhowr iyo farac ka mid ah qaar ka mid ah, kuwaas oo dadka gaboobay ka fog tuulooyinka iyo hadda soo orday oo ku nool magaalada iyo qaar ka mid ah Koonfur Afrika, laakiin kuma fikirayo of ayeeyo ay jir ah iyo ciirsi dib.
Markii la weydiiyay sida ay si fiican u Naasixa wanaagsan ee loo taageeri waayeen helitaanka baxay xaaladda; waxay siiyeen talooyin kala duwan:
Haddii la siin kartaa qaar ka mid lacag ku salaysan bil kasta si ay u caawiyaan saabuun iibsadaan, faasliin, kulan , shumacyo iyo xanuunka( kiniiniyada)
Haddii ay jirto noqon kartaa suuqa caadiga ah ee dhan soo saarka beeraha si ay halkaas iibiyaan wax soo saarkooda qiimo xaraashka ah ka badan iibinta oo keliya in waratada tuulada kii, laakiin wax soo saarka gudahood qiimo giveaway. Ku dhawaad ​​khiyaameeyay beeralayda.
Bixinta gashiga beeraha ( bacriminta, abuurka iyo kiimikada)
Dhismaha Bank Midho ah iyo abaabulo dadka si ay halkaas ku kaydiso ay wax soo saarka si ay u isticmaalaan ama iibiyo marka ugu ayaa loo baahan yahay.
beeraha waraabka LWE SOCOSHO xulashada Waxaa la arkay in madaxdii badan oo tuulada ahaayeen daacadnimo ku filan si ay u doortaan kuwii ahaayeen kuwo aad u muhiim ah. Sida laga soo xigtay xaaladda nafteena by waxaannu aragnay, doorashada saddex kaliya dad badan oo ka mid ah xaalad isku mid ah oo aan ahayn shaqo fudud for ugaasyadii. Waxaa sidoo kale arkay in madaxdii tuulada qaar ka mid ah dad badan (deggan) badan tuulooyinka kale, sidaas kuwaas oo kuwa ka waaweyn waxa aan ahaa cadaalad ah u leedahay share of tiro isku mid ah la tuulooyinka kale ee yar yar.
Qaar kale ma u leedahay inaad doorato; oo waxay ku yidhaahdeen in wax kasta oo si fiican u Naasixa keeno waxaa laga yaabaa in ay u taageeraan iyaga wanaag iyo aqbalay noqon doonaa.
CAQABADAHA kulmay INTA LAYLI XAQIIJINTA THE.
siyaabo Jidka adag tahay Baaskiilada
jimicsi aad u adag socodka buurta
Eexda ah ee qaabka xulitaanka ah
waqti badan markuu arkay midkood macmiilka ka badan qorsheeyey Qaadashada
Xalalka la soo jeediyay
Bixinta Off Road Motor Bike ah ayaa laga yaabaa isgaarsiinta ee inta badan ka sahlan. A mid megdeeye qaado Up may gaari xamuul ah oo qiimo wanaagsan u dhaqdhaqaaqa iyo xitaa gaadiidka badeecadaha iyo wax kasta oo agab kale oo gargaar.
booqasho tuulada si joogto ah loo kordhiyo si ay sinnaani iyo hufnaan ka mid ah madaxdii sida ay u ogaadaan shaqadooda loo soo bandhigi doonaa mar kasta oo aan booqday.
waqti badan ayaa laga yaabaa ayaa la qaatay taageerada salaadda iyo sahaminta xal kale soo jeediyay in ka macaamiisha ah.
IIBSIGA, DHAQDHAQAAQA IYO QAYBINTA
Wadar ah 100 bacaha bur gallay waxaa soo iibiyey ee Lilongwe at qiimaha MK8,500.00 halkii pack kasta 25kg. -faa'iideystayaasha la helay macluumaad ah ee qaybinta ka madaxdii tuulada Group oo Qasriga tuulada ay. Barnaamijku wuxuu gaadhay jiro boosaska Champions marka aan arkay kasta ka-faa'iideystayaasha la miles badan socday oo ka soo baxay campus LWE la qoslayay; sidday kasta 25 kg oo bur gallay.
COMMENTS IYO aflagaada
Pastor Yunusu ku adkeeyay in ujeedada LWE oo taageero ka SENTAfrica iyo Church Niton waa in la caawiyo dadka ka mid ah laba madax tuulada koox is abaabulay; Ooga mashruuca waraabka is-joogtaynta iyo horumarinta barnaamijka caasimada xirfadaha. beeralayda Lead ka tuulooyinka lagu weydiin doonaa si loo fududeeyo siminaaro at dhismaha LWE meesha ugu dadka baahan ee bulshada kuwaas oo dhibtoonaya waxaa lagu weydiin doonaa in ay ka qayb siminaaro si looga caawiyo inay si fiican u sameeyo xilli ciyaareedka soo socda sii kordhaya. Waxaa la sheegay in si cad in loo qaybiyo oo galley ah ayaa la sameeyaa oo keliya si ay u caawiyaan kuwa adag iyo Miskiinka iyo on xaalad dhimanayaan. Group Village headman Kamphinda aqoonsanney hawsha wanaagsan ee LWE. Waxa uu sheegay in la soo bandhigay in LWE runtii waa Christian NGO ah oo ka howl gala uu tuulada. Waxa uu sheegay in wixii samafal ah ayaa samayn waa mid aad u la yaab badan oo kaliya ka fekerayo in NGO uu yahay oo kaliya shaqada Guest House iyo faa'iidooyinka kaliya gacanta Waxbarashada. Laakiin cuntada bixinta ayaa muujisay Tusaale ahaan waxa Rabbigeenna Ciise sameeyey. Waxa uu quudinta dad badan oo xitaa ka hor inta ku wacdiyaya iyaga. Maxaa LWE kiniisadda sameeyey waa ka badan minbarka work.He iyaga codsaday in ay ka qayb siminaaro beeraha ee marka la soo diyaarin.
The ugu dambeyntii ka codsaday ka-faa'iideystayaal ah oo joogay oo maanta oo dhan in ay qaataan goobta LWE lahaanshaha buuxa.
badeecadaha ayaa waxaa ka dibna u dhaqaaqay ka Lilongwe goobta Chitipi iyo u habeynta qeybinta waxaa laga sameeyey.